Home News Wasiir Sabriye oo sheegay in dacwadii CC Shakur si dhaqan ah lagu...
Wasiir Sabriye oo sheegay in dacwadii CC Shakur si dhaqan ah lagu xaliyay
Wasiirka Arimaha Gudiga oo ay isku beel ka soo jeedaan Cabdiraxman Cabdishakur ayaa sheegay in dhibkii ka dhacay guriga Cabdiraxman Cabdishakuur si ku salaysan dhaqanka Soomaaliga lagu xaliyay. Wasiirka ayaa sheeegay in isaga uu qaaday mas’uuliyadda xal u helida dhibkii dhacay. Waxa uu yiri “waxa aan la kulmay qooysaskii dhibka gaaray iyo madaxada dalka waxaana la isla gartay in lacag magdhaw ah la siiyo qooysaska ay ka soo jeedeen dadkii halkaa ku dhintay” Wasiirka ayaa ku daray ” arintaan waxaa kaalmo weyn ka gaystay ganacsato iyo oday dhaqameed beesha, si wanaagsan oo isafgarad lehna waa ay ku dhamaatay”.
Wasiirka ayaa sheegay in uusan isaga dhex galin ama uusan isku dayin in uu dhex galo dowlada iyo siyaasiga oo arimo gaarka ah isku haystaan. Dhawaan ayaan xisbiga Wadajir ay ku doodeen in uu burburay wadahadalkii iyaga iyo dowladda ka dhaxeeyay. Waxa is waydiin mudan waa maxay arimaha laga wada hadlayo marba hadii uu Cabdiraxman Cabdishakur raali ku noqday magta lacageed oo ay dowladda bixisay? Ma dowladda ayuu ka sugaayay in ay lacag isaga siiso ama raali galin ka siiso wixii dhacay? Dadka qaar ayaa la yaabay sida ay suuragal ku tahay in C/raxaman Cabdishakur sheegto in wadahadal isaga iyo dowladda u socday isaga oo habeen iyo maalin ka dhaleeceeya warbaahinta hogaanka dowladda?
Dhanka kale ganacsata iyo odoyaasha beeha Ceyr ayaa ayagana ka aamusay arintaan iyaga oo rumaysan in dhibkii dhacay la xaliyay oo meel la isla saaray?
Previous articleDarawalkii Xildhibaan Cadoow Cali Gees oo Muqdisho lagu Dilay
Next articleXildhibaan Aadan Isaaq oo qadiyadii Wasiir Siraaji ku badashay xil dowlad
Dowlada Sacuudiga oo ka Hadashay Weerar Lagu qaaday Ciidamada Talyaaniga!!